Visitor is reading सफल जिन्दगी भाग २
Visitor from US is reading पुल शिलान्यास गर्न जाँदा मन्त्रीको गाडी खोलामा डुब्यो
Visitor is reading Where is Mount Everest located?
Visitor is reading Tickets from KTM to CHICAGO
Visitor is reading Nepal "Maoist Eradication" Committee (NMEC)
Visitor from US is reading नासे ब्रो हेर्नुस त....
Visitor from SG is reading Rooms on Rent
Visitor from US is reading Divorce
[VIEWED 1038 TIMES]
Posted on 06-11-19 5:27 AM Reply [Subscribe]
स्याङ्जा : पुलको शिलान्यास गर्न अर्जुनचौपारी गाउँपालिका पुगेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रघुवीर महासेठ आफैं दरौ खोलामा फसे । अर्जुनचौपारी–३ स्थित खहरे खोलाको पुल शिलान्यास गरेर फर्कने क्रममा बा २ झ ४०२९ नम्बरको गाडीमा सवार मन्त्री महासेठसहित अन्य खोलामा फसेका थिए ।
बर्षाको समय । खोलाको अन्दाज नगरिकन पार गर्न खोज्दा गाडी खोलमा डुबेको हो खोलामा आधा डुबेको गाडीबाट सुरक्षाकर्मीले मन्त्री महासेठलाई बाहिर निकाली सुरक्षित ठाउँमा लगे । गाडी भन जेसीबीको प्रयोग गरी बाहिर निकालियो ।